Lafta-gareen oo dagaalkii Shabaab u weeciyay dhanka siyaasiyiinta (Warbixin) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Lafta-gareen oo dagaalkii Shabaab u weeciyay dhanka siyaasiyiinta (Warbixin)
Lafta-gareen oo dagaalkii Shabaab u weeciyay dhanka siyaasiyiinta (Warbixin)
Laba sano ayaa laga jooggaa maanta oo kale markii Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) loo doortay inuu noqdo Madaxweynaha Koonfur Galbeed (19-kii December, 2018), iyadoona uu caawa u dabaaldeggi doono sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay markii uu xilka qabtay.
Ciidamada ammaanka ayaa adkeeyay ammaanka Magaalada Baydhabo, iyadoo la joojiyay isku socodkii gaadiidka ee magaalada, gaar ahaan xaafadaha ku dhow dhow Madaxtooyada, halkaasoo uu Madaxweynuhu ku hawlgalo.
Wafdi uu hoggaaminayo Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo Wasiiro iyo Xildhibaanaba leh ayaa Jimcihii gaaray Magaalada Baydhabo, si ay uga qaybgalaan munaasabadda lagu xusaayo sanad guurada labaad ee ka soo wareegatay, markii Lafta-gareen loo doortay inuu noqdo Madaxweynaha 2aad ee Koonfur Galbeed.
Shacabka reer Baydhabo ayaa weli xusuusan dhiiggii ay Dowladda Federaalka u daadisay, si uu doorashada ugu soo baxo Madaxweynaha haatan joogga Madaxtooyada KMG Koonfur Galbeed ee Baydhabo iyo hujuumkeedii ka dhanka ahaa Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur).
Abuu Mansuur ayaa xilligaa ugu cadcadaa, loona saadaalinayay inuu doorashada ku soo bixi doono, si looga hor wareejiyo musharaxii ay Villa Somalia wadatay-na ayaa keentay in laga soo xiro Magaalada Baydhabo, lagana soo dejiyo isagoo jeebeysan Magaalada Muqdisho, 13-kii bishii December ee sanadkii 2018. Maalintaa oo Khamiis ahayd waxaa Baydhabo ka bilowday toddobaad ay kacdoon sameynayeen dadka reer Baydhabo, isla-markaana ay ku diidanaayeen xarigii ay Dowladda Federaalka kula kacday Abuu Mansuur.
Ciidamada Booliska ayaa qori caaradii ku wajahay dadweynihii kacdoonka ka waday Magaalada Baydhabo, iyagoona toogasho ku dilay dhawr iyo toban qof, oo aan hubeysnayn.
Toddobaad ka dib waxaa Baydhabo ka dhacay doorashadii uu xafiiska kula wareegay Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen), oo dadku ku tilmaameen Madaxweynaha dooran ee la doortay, sababo ku aadan Villa Somalia oo mallaayiin dollar ku indho daran-daarisay Xildhibaanadii Baarlamaanka 1aad ee Koonfur Galbeed, toddobaadkii qalalaasaha.
Xildhibaanadan oo bilowgii hore garab iyo gaashaanba u ahaa Abuu Mansuur ayaa markeliya la arkay, iyagoo ka soo jeestay safka Xukuumadda Muqdisho, waxaana xusid mudan in Xildhibaanadaasi la bedelay bishii March ee sanadkan, oo la soo dhisay Baarlamaanka 2aad ee Koonfur Galbeed.
Labada sano ee xafiiska uu jooggo Madaxweyne Lafta-gareen ayuu Abuu Mansuur sanadkii 1aad xabsi ku qaatay Xarunta Hay’adda Nabad Suggida ee Magaalada Muqdisho, iyadoo sanadkii xigayna loo wareejiyay xabsi guri.
Madaxweyne Lafta-gareen ayaa muddada uu xafiiska jooggo uu ka gaabiyay la dagaalanka Ururka Al Shabaab, xilli ay weli taagantahay go’doominta adag ay ku hayaan degmooyinka iyo deegaanada Koonfur Galbeed qaarkood, iyadoo go’doomintaasi ay dad badani ku khasbeen in ay guryahoodii ka cararaan, isla-markaana ay door bideen inay barakacayaal ku noqdaan Magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho.
Madaxweynaha ayaa dagaalkaasi u weeciyay dhanka siyaasiyiinta iyo cid walboo dhaliisha maamulkiisan fadhiidka ah, iyadoona aanay maanta jirin cid dhaliili karta oo ku sugan Xarunta Gobolka Baay ee Magaalada Baydhabo.
Xabsiga Dhexe ee Baydhabo (Gaalshiraha Baydhabo) waxaa ku xiran siyaasiyiin iyo dhalinyaro saluugay horu-socod la’aanta maamulka ka arrmiya Madaxtooyada Baydhabo, halka qaar kalana horaan laga celiyay Garoonka Diyaaradaha ee Shaati-gaduud, loona diiday in ay gudaha u soo galaan magaalada. Maamulka Madaxweyne Lafta-gareen ayaana muujiyay inaanan magaaladaasi laga rabin dadka bannaanada ka dhaliila maamulkiisa.
Wariye-yaasha ka hawlgala Magaalada Baydhabo ayaa kuu sheegaya in Saraakiisha Madaxtooyada ay caburin xoog lihi ku hayaan cid kastoo ka hortimaada amaba tooshta ku iftiimisa gaabiska badan ee maanta ka jira Madaxtooyada, iyagoo markaasi adeegsanaya Ciidamada Booliska.
Si kastaba ha-ahaatee munaasabadda caawa lagu wado in ay ka dhacdo Madaxtooyada ayaa la fillayaa in Madaxweynuhu uu ka jeediyo khudbad uu kaga hadlayo waxqabad aan ahayn dib u dhacaan iyo caburinta taagan.
Previous articleTirada dadka ku dhintay qaraxii Gaalkacyo oo korodhay
Next articleDowladda Somaliya oo ka digtay Ciidamo ay sheegtay Kenya inay ku hubeynayso Mandera